मृगौला पिडीतलाई अनेरास्ववीयूको सहयोग – Gandaki Media
Posted on September 28, 2018 September 28, 2018 Author By admin	Comment(0)
असोज १२, पोखरा । भरतपुर महानगरपालीका–१६ घर भएकी वर्ष १० की मृगौला, पेट तथा टाउकोको समस्या पिडीत विवस्ता कोइरालालाई अनेरास्ववीयू कास्की को सयोंजकत्वमा आर्थीक सहयोग गरिएकोे छ । पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पस गेटमा एक समाहोरका विच अनेरास्ववीयू कास्कीका अध्यक्ष विवेक देवकोटाको नेतृत्वमा नगद संकलन गरि रु. ८००० (रु. आठहजार) हस्तान्तरण गरिएको हो ।
सेनामा भर्ना खुल्यो झण्डै ३८ सय संख्या
Posted on November 26, 2018 Author By admin
१० मंसिर, । नेपाली सेनाले झण्डै ३ हजार ८ सय संख्यामा भर्ना आह्वान गरेको छ । लेखा जमदार, अमलदार, सैनिकदेखि केशकर्तकसम्मका पदहरुमा भर्ना खुलेको हो । नेपाली सेनाको भर्ना छनौट निर्देशनालय कार्यरथी विभागले सोमबार प्रकाशित गरेको सार्वजनिक सूचनाअनुसार लेखा जमदार, अमलदार कर्मचारी, सहायक पण्डित हुद्धा, सैन्य मेडिकल, सैन्य सिग्नल, सैन्य ड्राइभर, सैन्य वाद्यवादन (ब्रास ब्याण्ड), […]
विश्व समाचार समाज
काठमाडौँ, जेठ २। बुधबार बिहानदेखि सम्पर्कबिहीन भएको मकालु एयरलाइन्सको कार्गो जहाज हिमाली जिल्ला हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका बाहुन खर्कमा फेला परेको छ । जहाजमा रहेका दुवै चालकको मृत्यु भएको छ । उद्दारमा गएको माउन्टेन हेलिकप्टरले दुर्घटनास्थल पत्ता लगाएको हो । दुर्घटनास्थलमा सेना र प्रहरी पुगिसकेको छ । ज्योतिषको दाबी: सलमान खानको सबैभन्दा ब्लकबस्टर फिल्म हुनेछ ‘रेस ३’, कमाईमा पनि सबै […]
विचार/विविध समाचार समाज
एक रूपैयाँ बढी भाडा लिए पनि यी नं. हरुमा फोन गर्नुहोस्
१५ असोज । सार्वजनिक यातायातमा सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा लिए गाडी नम्बरसहित उजुरी गर्न यातायात व्यवस्था विभागले आह्वान गरेको छ । विभागले गत असोज ७ गते सार्वजनिक यातायातमा १० प्रतिशत भाडा बढाएको थियो । बढेको भाडाअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा चार किमिसम्मको भाडा १४ रुपैयाँ तोकिएको छ । पाँच किमीसम्म १६, छ किमिसम्म १७, आठ किमिसम्म १८, […]